भारतमा सङ्क्रमितको संख्या एक करोड नजिक - नेपालबहस
भारतमा सङ्क्रमितको संख्या एक करोड नजिक
५ मंसिर २०७७ | १५:३२:४२ मा प्रकाशित
५ मंसिर, काठमाडौं । भारतमा कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित भएकाहरुको संख्या ९० लाख नाघेको छ । शुक्रबार मात्रै ४५ हजार ८८२ जना नयाँ सङ्क्रमित थपिएका हुन् । कुल सङ्क्रमणमुक्त भएकाहरुको संख्या भने ८४ लाख भन्दा बढी रहेको छ ।
भारतमा सङ्क्रमणमुक्त भएकहरुको दर ९३.६ प्रतिशत रहेको केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म कुल ९० लाख चार हजार ३६५ जना सङ्क्रमित भएका हुन भने कुल एक लाख ३२ हजार १६२ जनाको मृत्यु भएको छ । ती मध्ये ५८४ जनाको पछिल्लो २४ घण्टामा मृत्यु भएको हो । भारतमा अहिले पनि सङ्क्रमित अवस्थामै रहेकाहरुको संख्या चार लाख ४३ हजार ७९४ रहेको छ ।
कोरोनाले थप ८ जनाको ज्यान गयो ४ घण्टा पहिले
प्रधानमन्त्री ज्यू, अब माखे साङ्ग्लोको अन्त्य गर्नुस ! ८ घण्टा पहिले
ग्यास बुलेटले ठक्कर दिँदा दुई जनाको मृत्यु १ घण्टा पहिले
शिविरमा पशुलाई उपचार गर्दै २ घण्टा पहिले
गणेशलाई किन तुलसी चढाउनु हुँदैन, शास्त्रमा के भनिएको छ ? ३ घण्टा पहिले
बेवारिसे १८ गोलिया खयरको काठ बरामद १४ घण्टा पहिले
सुपथ मूल्य पसल माघ महिनासम्मै चल्ने १४ घण्टा पहिले
आर्यनसँग पुड्की सुहानाको जोडी जम्ला ? १२ घण्टा पहिले
सराङ्कोटमा पर्यटक १ दिन पहिले
पूर्वमन्त्री बाँस्कोटा भन्छन्, भाषणमा सुशासन भन्नेले व्यवहारमा देखाऔँ ७ घण्टा पहिले
चिनियाँ रक्षामन्त्री नेपाल किन आउँदैछन् ? ३ दिन पहिले
सुदुरपश्चिममा राजतन्त्र पुर्नबहालीको माग गर्दै प्रर्दशन ४ दिन पहिले
कांग्रेसभित्रको कंश प्रवृत्तिबिरुद्ध डा. शेखरको आवश्यकता २ दिन पहिले
विदेशमा रोजगारी गुमाएर फर्किएकालाई स्थानीय सरकारले जागिर दिदैँ ६ दिन पहिले
ढुङ्गा उत्खनन गर्न रोक, अनुगमनपछि मात्रै अनुमति ! ५ दिन पहिले
अब पार्किङको निगरानी गर्न नगर प्रहरीको नियमित ड्युटी ४ हप्ता पहिले
पछिल्लो २४ घण्टामा ११ संक्रमितको मृत्यु ४ हप्ता पहिले
शर्माको सम्झनामा शोक सभा सम्पन्न ५ दिन पहिले
अफ्रिकामा भोकमरीको चरम सङ्कट, युएनद्वारा सहयोगको घोषणा १ वर्ष पहिले
घरभित्रै दशैँ मनाउन प्रशासनको अनुरोध १ महिना पहिले
न्यून चापीय प्रणालीको प्रभावले कैलाली र कञ्चनपुरमा भीषण हावाहुरी [फोटोफिचर] १ वर्ष पहिले
डुबानमा फसेका २४ जनाको उद्धार ३ महिना पहिले